LOMANO – « MONDIAUX DE HANGZHOU » :: Zava-bita tsara indrindra enina montsana tany Chine • AoRaha
LOMANO – « MONDIAUX DE HANGZHOU » Zava-bita tsara indrindra enina montsana tany Chine
Na dia tsy nisy medaly azon’ ireo mpilomano malagasy niatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany aza dia nahavita nanamontsana zava-bita tsara indrindra enina ireo solon- tenantsika nifaninana tamin’ ny dobo filomanosana mirefy 25 metatra. Nahatratra efatra ireo zava-bita tsara indrindra nohatsaraina teo amin’ny olon-tokana ary roa, teo amin’ny lomano mifampitohy.
Isan’ireo niatrika an’ity fifaninanana maneran-tany tany Hangzhou, Chine, tamin’ny 9 – 16 desambra ity i Lalanomena Andrianirina, Murielle Rabarijaona, izay nanatsara ny zava-bita efatra. Teo amin’ny lomano mitsilany 50m dia vitan’i Lalanomena tao anatin’ny 27’’16 izany raha 27’’26 no namitany izany, iray volana lasa. Laharana faha-40 izy tamin’izany.
Montsany ihany koa ny fe-potoana kely indrindra teo amin’ny lomano mitsilany 200m (2’09’’90/2’10’’05).
Teo amin’ny lomano tsotra 800 m kosa no nahenan’i Murielle Rabarijaona, tany an-toerana (9’44’’98/9’53’’81). Laharana faha-28 izy, tamin’izany.Vitan’i Murielle ihany koa ny nanatsara ny zava-bita tsara indrindra teo amin’ny lomano tsotra 400m (4’46’’08/4’47’’63). I Nomena sy Michel kosa no nahavita nanatsara ny fe-potoana kely indrindra teo amin’ny lomano mifampitohy zazalahy, raha i Murielle sy Samantha no nahavita izany teo amin’ny sokajy zazavavy.
“Nilaina ny niatrika an’ ity fifaninanana maneran-tany ity mba nahafahana nandrefy ny lentan’ireo mpilomano malagasy. Noentina nanamafy ihany koa ny fifandraisana iraisam-pirenena tamin’ ireo Federasiona taty amin’ny faritra fahefatra aty Afrika”, hoy i Harivola Marie Sarah Razafindrainibe, tale teknika nasionalin’ny Federasiona.